Ataovy farafahakeliny ny Bodhi distro | Avy amin'ny Linux
Gerak | | Fitsinjarana, GNU / Linux
Anisan'ireo fizarana tsy misy farany izay misy ao amin'ny Linux, ny tsirairay dia noforonina miaraka amin'ny hevitra manatsara ny fiasan'ny rafitra. Fandraisana an-tsary, maodely lalao, fizahana tranonkala, fampandrosoanaIreto misy faritra vitsivitsy izay tian'ny mpampiasa hatsaraina amin'ny solosain'izy ireo. Na izany aza, tsy ny solosaina rehetra no manana ny takiana farafahakeliny izay mila mihazakazaka ny rafitra. na ho fitaovana taloha, na hanana loharanom-bola voafetra, izay tsy ahafahana mametraka ireo fizarana matanjaka toy izany. Toy izao no mipoitra ny fizarana fizarana vaovao, izay tanjon'izy ireo mamorona rafitra fandidiana maivana dia maivana ary mitaky ny takiana amin'ny rafitra kely indrindra, ilaina amin'ny solosaina matanjaka toy ny tsy dia matanjaka loatra. Raha tianao ny hevitra rafitra maivana sy ny tombony rehetra entiny dia mety hahaliana anao izany Bodhi.
Bodhi dia fizarana Linux maivana ary haingana mifototra amin'ny Ubuntu. Izy io dia manana ny anarany Pali sy Sanskrit term (बोधि) izay midika hoe «Fanazavana ". Ny logo dia manondro ny hazo Bodhi, ilay hazo izay nipetrahan'i Buddha taloha ary nahazo fahazavana ara-panahy.
Ny fepetra takian'i Bodhi amin'ny rafitra dia kely dia kely. Afaka milamina miaraka RAM 128MB, 500Mhz processeur y 4Gb ihany ny habaka kapila. Na dia manome soso-kevitra 512MB aza ny mpamorona, 1Ghz an'ny processeur ary 10Gb ny habaka kapila.
Bodhi, dia miorina amin'ny singa roa:
Tontolon'ny birao Moksha
Ny hevitr'i Bodhi dia ny fanolorana rafitra maivana sy maodely, amin'io fomba io, ny mpampiasa dia hanana izay ilaina ilaina amin'ny fampandehanana ny distro ary avy eo, arakaraka ny filàn'izy ireo, dia azon'izy ireo ampiana ny fonosana sy ny rindranasa ao amin'ilay rafitra ny tian'izy ireo. Amin'izany fomba izany, Bodhi dia manome rafitra iray izay tsotra nefa 100% azo ampiasaina, miaraka amina vondrona fampiharana izay mitentina latsaky ny 10Mb habaka tanteraka. Anisan'izany ireto:
ePad: Mpanonta lahatsoratra
PCManFM: Mpitantana rakitra
ePhoto: Mpijery sary
eepDater: Mpandrindra fanavaozana
Satria i Bodhi dia miorina amin'ny Ubuntu, azo atao ny mametraka ny fonosana sy programa rehetra avy amin'ny toerana anaovana Ubuntu, ho fanampin'izay, ny vavahady Bodhi dia manana AppCenter, izay misy lisitr'ireo fampiharana ultralight manokana ho an'ity distro sy programa hafa atolotra ity.
Bodhi no manana ny Tontolon'ny birao Moksha - Fahazavana17, natao ho malefaka, haingana ary azo ampiharina araka izay itiavanao azy. Izy io dia mamela effets sy sary mihetsika be dia be mitaky ny farafahakelin'ny rafitra ary mitazona ny famolavolana ny birao Linux. Lavitra, Moksha dia azo ampiasaina, amin'ny alàlan'ny vondrona lohahevitra natolotry ny Bodhi AppCenter.
Na eo aza ny fanakatonana ny tetik'asa Bodhi, noho ny fandaozana ireo mpamorona azy rehetra, ny mpitarika ny tetikasa JEFF Hoohgland Nahavita namorona ekipa asa vaovao aho ary androany dia mitohy ny tetik'asa, fotoana fohy taorian'ny nahatafavoaka azy, miaraka amin'ny kinova ankehitriny Bodhi 3.2.1 miorina, natomboka ny volana martsa lasa teo.
Azonao atao ny mametraka Bodhi amin'ny kapila USB (atoro anao) amin'ny alàlan'ny fampidinana ny ISO ho an'ny rafitra 32Bit sy 64Bit vavahadin-tranonkala. Izy io dia manana dikanteny roa, ny Famotsorana mahazatra, ho an'ny fametrahana fototra ny distro, ary ny Famotsorana AppPack, ho an'ny fametrahana Bodhi ao anatin'izany ny fampiharana fanampiny toa ny
Birao maimaim-poana 5
Azonao atao ny manamarina ny ambiny eto.
Ny vondrom-piarahamonina Bodhi dia mavitrika tokoa, manana ny Wiki misy azy avy. Miaraka amin'ny fampahalalana marobe momba ny distro, mandeha amin'ny alàlan'ny Bodhi, rafitra takiana, fizotry ny fametrahana, kaody loharano ho an'ny mpamorona ary atsaharo ny fanisana. Izy io koa dia manana ny Bodhi Forum, hamaly fanontaniana, ary manana IRC misy ihany koa ho an'ireo mpampiasa distro.
Tsotra, haingana, maivana ary namboarina araka izay itiavanao azy. Raha manana solosaina manana fiasa tsara ianao, Bodhi dia manome anao fotoana hananganana ny rafitra fiasanao saika hatrany am-boalohany, ary raha ny mifanohitra amin'izay dia manana solosaina ambany ianao, mamela anao hanana fizarana Linux miasa tanteraka ao aminy i Bodhi.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Ataovy farafaharatsiny farafaharatsiny miaraka amin'ny distro Bodhi
Lahatsoratra tena tsara, saingy manana ahiahy iray aho: inona no tianao holazaina amin'ny rafitra maodely?
Fabrizio dia hoy izy:
Mijanona miaraka amin'ny Puppy aho 😀
Valiny tamin'i Fabrizio
Ry Javier malala, ny rafitra Modular dia midika fa ny fandidiana dia ahafahanao mampiditra sy misafidy ny famenon'ilay rafitra misaraka araka ny filanao. Izany hoe, azonao atao ny misafidy na hampiditra ny maodelim-peo na tsia, na ny hampiditra ny modely fanaraha-maso backlight, na hampiditra ilay modely hanana panne, sns. anisan'izany ny add-ons sy ny widget any amin'ny birao… sns. Misy fizarana iray amin'ireo safidinao izay ampiasanao na hanaisanao ny maody tsirairay ilainao, ary ampifanaraho fotsiny ...
Salama Javier. Ny rafitra maoderina dia midika fa ny rafi-piasana dia mamela anao hisafidy ireo singa tsirairay tianao hananan'ny rafitra "entina" ary iza amin'ireo no tsy ... amin'izay dia azonao antoka fa mampiasa izay tena ilainao ianao, mamonjy loharanom-bola amin'ny alàlan'ny famonoana izay tsy mila ianao. Ohatra. Azonao atao ny mitondra na tsia ny fifehezana ny volume, ny sistray, ny tontonana, ny fanaraha-maso ny jiro, ny firafitra sns sns. Ao anatin'ireo safidinao dia misy fizarana entina manafatra - ampidino ireo modules.
Leonel Cali dia hoy izy:
Salama Javier! Efa ela aho no nampiasa bodhi linux, ny marina dia mahatalanjona sy ny rafitra maodely, amin'ny zavatra niainako fohy dia modely izy ireo - mendrika ny fihoarana - azo apetraka na esorina nefa tsy misy fiatraikany amin'ny rafitra ary mifehy tanteraka izay mandany ondrilahy.
Anisan'ireo modules ny manager batterie, famantaranandro, jiro ary zavatra tsy misy farany azonao apetraka sy ampanjifaina. Misy maodely tsy hita isa ho anao hizaha toetra sy hanova izay tianao ao amin'ny biraonao na ny anjaranao.
Valiny tamin'i Leonel Cali
Erick zanardi dia hoy izy:
Tsy «Chicharrón de sache» io. Milanja, ny AppPack, 1,22GB ...
Mbola misintona azy aho…. Te hanandrana Distro maivana aho ... Ary hanova kely ny maharitra mandrakizay, malalako mandrakariva ary manana lanjany mandrakizay LUBUNTU !!!
Misaotra amin'ny POSTS !!!!
Avy any Maracay ka hatrany amin'izao tontolo izao !!!!
Valiny tamin'i Erick Zanardi
Toetra mampiavaka sy toetran'ny Android Studio